FAQs - Quanzhou Aqua-Tech Trading Co., Ltd.
Column Double Vertical Lathe
Buugga Vertical Lathe Machine
Turning Vertical Oo Machine shiidi Lathe
Station Multiple Machine Transfer
Machine Transfer Horizontal
Vertical Oo Machine Transfer Horizontal
Machine Transfer Vertical
Complete Manufacturing Solution
Auto assembly machine for flexible hose
Faucet production line solution
Valve production equipment
Door closer production line solution
Floor spring production line solution
PTFE tape production line solution
Locker cylinder production solution
End Mill Furimaha Dagaalka
Shaxda kala saraysa
Waa maxay qiimaha aad?
Qiimaha Our way isbadali ku xiran tahay arrimo kale oo suuqa sahayda iyo. Waxaan kuu soo diri doonaa liiska qiimaha updated ka dib markii shirkadda aad nala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah.
waxaad siin kartaa dukumentiyada ku habboon?
Haa, waxaan ku siin karaan warqadaha ugu oo ay ku jiraan CE, ISO9001, Certificates of An
alysis / waafaqsan; Caymis; Asal ahaan, iyo waraaqaha kale ee loo dhoofiyo meesha looga baahan yahay.
Ayaannu gudbaynaa oo ku certifciation ISO9001 iyo CE.
Maxaa ku saabsan tayada?
From design marayo wax soo saarka, Aqua-tech Tayada nidaamka maamulka waxaa daro meel walba oo ka mid ah ganacsatada. Falanqaynta iyo kantaroolka-waqtiga dhabta ah waxa la sameeyaa habka wax soo saarka, damaanadna tayada guud ee waxyaabaha our '. Heer sare Aqua-casriga ah waxaa aqoonsan caddeyn badan iyo accreditations ka maamulayaasha our ugu weyn.
Waa maxay noocyada kala duwan ee hababka lacag bixinta u ogolaan kartaa?
Waxaad samayn kartaa lacag bixinta waa in lala xisaabtama our bangiga, Western Union ama PayPal:
deposit 30% ka hor, 70% dheelitirka dhanka ah nuqul ka mid ah B / L.
Ma waxaad u damaanad bixinta oo nabad iyo xasilooni alaabta?
Haa, waxaan had iyo jeer isticmaalaan baakada dhoofinta tayo sare leh. Waxaan sidoo kale u isticmaali xirxirida halis gaar ah alaabta khatarta ah iyo ansixiyey wax rarta, kaydinta qabow heerkulka waxyaabaha xasaasiga ah. Baakadaha Specialist iyo shuruudaha lagu cabayn aan caadiga ahayn la kulmeyso laga yaabaa in lacag dheeraad ah.
Sidee ku saabsan kharashka maraakiibta?
kharashka maraakiibta waxay ku xiran tahay sida aad doorato in aad hesho alaabta. Express sida caadiga ah waa ugu dhaqsaha badan, laakiin sidoo kale habka ugu qaalisan. By seafreight waa xalka ugu fiican xaddi weyn. Sida saxda ah heerka xamuulka waxaannu kugu siin karaa oo kaliya haddii aan ogaan faahfaahinta xaddiga, miisaanka iyo jidka. Fadlan nala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah.
Sidee ku saabsan Adeegga Machine aad?
adeegga macaamiisha socdo amar aad ku salaysan shakhsi marxalad kasta ee wax soo saarka, processing iyo logistics. Thanks to our xarumaha qaybinta, nidaamka macluumaadka iyo nidaamka joogto ah horumarka iyo wax soo saarka dabacsan, waxaan tayadoodii jeer hogaanka iyo bixinta badeecada aad.
Waa maxay waqtiga hogaanka celcelis ahaan?
dekedda loading Our: dekedda xeebaha geeska Afrika. Ama dekedda dadka kale Shiinaha sida ay waqti hogaanka requirements.The sida caadiga ah waa 20-60 maalmood ka dib qaadato lacagta deebaajiga. Mashiinka ujeedada gaarka ah uu noqon doono wada hadlaan. The jeer hogaanka u noqon wax ku ool ah marka (1) aannu ku helnay debaajigaaga, iyo (2) waxaan leenahay ogolaansho aad final ee wax soo saarka aad. Haddii jeer hogaanka our ma la xirmin suuqa shaqeeyaan, fadlan u gudbo shuruudaha aad la leedahay sale. In kiisaska oo dhan waxaan isku dayi doonaa in la tixgeliyo baahidaada. Xaaladaha intooda badan, innagu waxaynu nahay awoodaan in ay sidaas sameeyaan.
Rabto inaad ka shaqayso WITH US?
HELI NEWS LATEST KA US
By dhagaysto adiga iyo isagoo si joogto ah heli karaa heer walba oo mashaariic aad, iibka iyo kooxo taageero farsamo aannu idiin talo iyo dar qiimaha dhabta ah waxtar leh.
LINK DEGDEG AH
NO.1 DA SHI XIMEI VILLAGE MEILIN STREET NANAN CITY FUJIAN PROVINCE
© Copyright - 2010-2019: Dhamaan Reserved Rights. Products Featured - Tags Hot - Sitemap.xml - amp Mobile
Cnc Vice Spindle Collet, Floor Spring Glass Door Machine, Collet ku tirtirayaan, Drilling siyoodba Machine, Pneumatic xigeenka daanku,
Dhuftay galaan si ay u baadhaan ama ESC in la xiro